နှင့်အင်တာဗျူး: AdLemons | Gadget သတင်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Facebooknoticias.com တွင်ပြုလုပ်သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှရရှိနိုင်သောအလားအလာကိုဖော်ပြသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာသင့်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံများနှင့်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများ client နှင့်ကုမ္ပဏီအကြား, သူတို့ကအရမ်းအပြုသဘောအလှည့်ယူပါ။
Miguel Angel Ivars Masသင့်ရဲ့အချိန်အနည်းငယ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်သင်၏အဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မေးသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ကများသောအားဖြင့်သိလေ့ရှိသည့်နောက်လိုက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့မဟုတ်ဘဲယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အုပ်စုတ ဦး တည်းကိုပိုမိုအလုပ် tool တစ်ခုဖြစ်သည်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်တင်နိုင်သည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်နောက်ဆုံးရေးသားထားသည်ကိုဖော်ပြရန်၊ အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များအကြားအများဆုံးဆက်သွယ်ရေး။
နောက်ထပ် ado မရှိရင်နဲ့အင်တာဗျူးမှာခုန်ကြစို့:
Question.- အဘယ်ကြောင့်၏အမည်: Adlemons?
အဖြေ AdLemons သည်ဘာစီလိုနာတွင်ပထမဆုံး iWeekend မှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးထိုတနင်္ဂနွေတွင်ထိုအသင်းကိုဖွဲ့စည်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့မှနာမည်ပေးခဲ့သည်။ စိတ်ကူးတစ်ခုကမှတ်မိလွယ်လွယ်တဲ့နာမည်ကောင်းတစ်ခုကိုစုစည်းပြီးဘလော့ဂ်များနှင့်မည်သူမည်ဝါကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းနှင့်အတူကြော်ငြာအတွက်အင်္ဂလိပ်ကြော်ငြာအတိုကောက် "ကြော်ငြာ" နှင့်အတူကြော်ငြာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့အဲဒီကနေ AdLemons = Blog Advertising
Adlemons အစစ်အမှန်ရည်ရွယ်ချက် Q.-?
R.- AdLemons ၏စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်သည်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဆက်ဆံရေးကိုရရှိရန်အတွက်နှစ်ဆဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်တွင်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားရန်စိတ်အားထက်သန်နေသောဘလော့ဂါများသည်သူတို့၏ဘလော့ဂ်များကိုသင့်တော်သောနည်းလမ်းဖြင့် (နှင့်တောင်မှထိုအရာ မှနေ၍ ပင်ရှင်သန်နိုင်အောင်) စပွန်ဆာကြော်ငြာခြင်း၊ လှည့်ခြင်းမပြုခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း၊ ထင်မြင်ယူဆခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူစွာဖြင့်ပေးဆောင်သည်။ ရလဒ်ကောင်းများမရှိပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကြော်ငြာရှင်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘလော့ဂ်များ၏တည်ကြည်မှု၊ ဆေးညွှန်းနှင့်မိုက်ခရိုအပိုင်းအစများ၏လွှမ်းမိုးမှုများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအလွယ်တကူယူနိုင်ခြင်းသည်အလွန်ထိရောက်သောအမြတ်အစွန်းရှိသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
R.- တကယ်တော့ဒါဟာရှည်လျားလွန်းတယ် .. ငါပြောခဲ့သလိုပဲ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က iWeekend မှစီမံကိန်းကို၎င်း၊ မသိသောသူများအတွက်အင်တာနက်တည်ထောင်ရန်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုစွမ်းရည် ၅၀ ကိုအတူတကွစုစည်းစေသောဖြစ်ရပ် တနင်္ဂနွေနေ့က startup ။ ထိုစပ်စုသောမွေးမြူရေးမြေမှဒီနေ့၏မျိုးစေ့ထွက်လာသည်။ စျေးကွက်သုတေသန၏နောက်ကွယ်တွင်အလုပ်များစွာနှင့်စမ်းသပ်မှုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုရရှိရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရှိပြီးသားကြော်ငြာခြင်းများကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အထူးကြပ်မတ်စွာအသုံးပြုခြင်းတို့ဖြင့်ရှည်လျားသောလမ်းတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်းအနက်မှ Bancaja အတွက်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးစီမံကိန်း "။
Q.- ကုမ္ပဏီအတွက် Facebook အုပ်စုတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကားအဘယ်နည်း။
R.- AdLemons ဝန်းကျင်တွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားချိန် မှစ၍ များစွာသောသူငယ်ချင်းများနှင့်အသိမိတ်ဆွေများသည်ဘလော့ဂ်များနှင့်ကြော်ငြာခြင်းများနှင့်နှစ်မျိုးလုံးပေါင်းစပ်ခြင်းများကိုစိတ်အားထက်သန်သောအသိုင်းအဝိုင်းတွင်များပြားစွာရှိသည်။ ပြီးတော့အဖွဲ့ထဲမှာသူတို့တွေ့ဖို့နေရာပါ။
R.- ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဖွဲ့ရှိသဖြင့်ယခင်မေးခွန်းတွင်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးဆုံးနောက်လိုက်များနှင့်ဖောက်သည်များထံရောက်ရှိရန်အလွန်တိုက်ရိုက်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့ထံကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သူတို့အမြဲတမ်းဂရုမစိုက်ပါက ဤနည်းဖြင့်သင်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးပြုသူမှတ်ချက်များကိုအာရုံမစိုက်ဘဲ၎င်းတို့ကိုသင်တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါကစိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အုပ်စုတစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားမည်သည့်နည်းတူမဆိုကုသမှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုခံယူသင့်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ တယ်လီဖုန်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုအီးမေးလ်စသည့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအသစ်ကိုဖွင့်နေသည်ကိုသင်တစ်ခါတစ်ရံသတိမထားမိပါ။
Q.- ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဖွဲ့များနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ထင်မြင်ချက် သူတို့သည်အဘယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ကြသနည်း။
R.- ၎င်းတို့သည်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်း ("Join the group" ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်) နှင့်လက်ရှိတွင်စိတ်ဝင်စားမှု၊ စိတ်ကူးသို့မဟုတ်ဆကျဆံရေးကိုမျှဝေသူများကိုအတူတကွစုစည်းရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခြားပြissueနာတစ်ခုမှာဤလူများကိုအတူတကွစုစည်းခြင်းအပြင်အခြားရည်ရွယ်ချက်များကိုအောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » AdLemons နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုထည့်ထားသည့်ကျွန်ုပ်၏ facebokk ကိုမရရှိနိုင်သောမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်
အန်းဒရွိုက် OS ကို
Chrome အတွက် Firebug